Yaa Musuqmaasuqa Wasaardda Caafimaadka Soomaaliya Masuul Ka Ah? – Somali Sounds
Yaa Musuqmaasuqa Wasaardda Caafimaadka Soomaaliya Masuul Ka Ah?
July 12, 2020 July 12, 2020 Somali Sounds.comComment(0)
Waa faalo aan ugu magacdarnay yaa masuul ka ah musuqmaasuqa iyo maamul xumada lagu soo eedeeyay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya.
Waxaa la xiray bishii April 2020 Agaasimaha Guud ee Wasaradda Caafimaadka, Cabdulaahi Xaashi iyo shan agaasime ee ka tirsanaa shaqaalaha wasaradda iyo sedex ka mid ah agaasimayaasha iyo qeybo kamid ah madaxda mashaariicda .
Wasiiradda Caafimaadka Fowsiya Abiikar Nuur ayaa saaxiibo dhaw la aheyd agaasimaha Guud,
waxaana ka dhaxeeyay wadashaqeyn hoose sida aan ku helnay xogaha.
Waxaa cajiib ah in Wasiiradda Caafimaadka Fowsiya danbiga eey laheyd loo maqaar saaray Agaasimaha Guud Cabdulaahi Xaashi , sida eey shegeen garyaqaanada maxkamadda .
Agaasimaha Guud ayaa ka sheegay maxkamadda horteeda in wax walba uu Wasiiradda kala tashan jiray cadeeyn suganna uu hayo.
Dhanka kale Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa ka hor cadeeyay maxkamadda in ay si sharciga qilaafsan ay lacag dhan $3000 si naas-nuujin bil walba lagu bixin jirey guri ku yaal agagaarka Airportka si dadbanna ay Wasiiradda ka manaafacday shaqsiyan.
Waxaa kalo uu shegay Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda in eey bil walbo siin jireen Wasiiradda lacag joogta ah.
Sharci yaqaanada ayaa shegay in eey masuuliyadda dhaqaalaha la lunsaday ay leedahay Wasiiradda Caafimaadka Soomaaliya Fowsiya Abiikar Nuur, taasne badalkedii loo maxkamadeynayo Agaasimaha Guud .
Wasiiradda Caafimaadka Fowsiya Abiikar Nuur ayaan aheyn qof siyaasi ah ama saaxiibo ku leh siyaasadda , awoodna ama saameyn ku laheyn beesha eey ka soo jeedo.
Sida aan ku helnay xogo kalena waxeey shegeysaa in la soo gabagabeyn rabo maxkamadda, Agaasimaha Guudna lagu waaayey denbi, qareenadana ay ku andocoodeen in Wasiiradda eey qeyb ka tahay dhaqaale lunsiga sharciga qilaafsan cadeeymo badana la horkeenay maxakamada.
Warar hoose oo kale ayaa sheegayo in Wasiir Fowsiya Abiikar Nuur ineey qabanqaabineyso safar dalka dibadiisa kadibna iscasilaad shaqo soo gudbin doonto ayna ku biiri doonto mucaaradka Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, taasoo keeni karto culeys siyaasadeed.
La soco xogo badan ee ku saabsan arinkaan!
General Koronto’ oo dhaliilay siyaasiyiin caan ah Muuqaalka halkaan ka daawo
Taliyihii hore ee Qeybta 27aad ee Ciidanka xoogga dalka General Koronto oo la hadlay warbaahinta…
Duqeyn ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxaa la sheegay in…
Kooxda Manchester United oo shalay guul cariiri ah ka gaartay West Ham.
kooxda Manchester United ayaa guul muhiim aheyd ka gaartay Kooxda West Ham kulan katirsanaa horyaalka…
Hadal Haynta ugu weeyn Muqdisho Imaanshaha Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed
April 22, 2019 April 22, 2019 Somali Sounds.com
Madaxweynihi hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna GudoomiayahaXisbiga Himilo Qaran ayaa la filayaa inu 25ka bisha tago Caasimada Muqdisho uu in mudo ah ka maqnaay taas oo ah hadal haynta ugu badan ee dadka Muqdisho. Sheekh Shariif ayaa sida warar hoose shegayaan wuxu Caasimada ku sugnaan donaa mudo todobaada waxana la hadal hayaa inu uga […]
April 25, 2019 April 25, 2019 Somali Sounds.com
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya SheekhShariif ahna Hoggaamiyaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa goor dhow soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxweyne Shariif ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Wasiirka Amniga Qaranka, Xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo mas’uuliyiin kale oo aad u fara badan Hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Shariif ayaa loo galbiyay guriga uu ka degan yahay […]
Wararka News in English
September 30, 2019 September 30, 2019 Mogadishu
MOGADISHU, Somalia – The Islamic militant group al Shabaab has carried out an attack on US airbase in Belidogle, in the south of the capital, Mogadishu. The attack started with a suicide car bomb explosion at the gates to a US drone base before gunmen swarmed inside the base. It unclear how many were killed […]